Guud ahaan Shiinaha oo ilaalinaysa warshad cajalad kuleyl leh iyo soo saarayaasha | SUREZEN
Tilmaamaha Isticmaalka guud ahaan ilaalinta ee cajaladda kuleylka kuleylka leh
Magaca Product:Isugeynta guud ee cajaladda kuleylka kuleylka leh
Model: Isugeynta Guud
Qeexitaannada: 165 (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL)
Badeecadani waa mid guud, oo ka kooban dabool, surwaal dhar ah, iyo dabool kabo leh koofiyad jilicsan, anqaw, dabool iyo dhexda, oo lagu tolay jiinyeer is-qufulka hore ah. Xargaha waa in lagu xiraa cajalad kuleylka lagu daboolayo. Shayga waa la tuuri karaa oo lagu tolay PE iyo PP filimka iskudhafan maro aan tolmo lahayn (waxyaabaha ugu muhiimsan). Waxaa jira saddex midab xulasho: cadaan, buluug iyo cagaar.
3. U adkaysiga u nuglaanta galmada: cadaadiska biyaha ee qaybaha muhiimka ahi waa inuusan ka yarayn 1.67kpa (17cmH2O);
4. Bixinta qoyaanka: Qoyaanka suufka maaddada waa inuusan ka yaraan 2500g / (m².d);
5. Iska caabbinta soo-gelitaanka dhiigga ee dhiigga ka samaysan: oo aan ka hooseyn Fasalka 2 (1.75Kpa);
6. U adkaysiga qoyaanka dusha sare: heerka qoyaanka ee dhinaca sare waa inuusan ka yarayn Fasalka 3aad;
7. Awood jabka: xoogga jabka qaybaha muhiimka ah waa inuusan ka yarayn 45N;
8. Dheeraynta waqtiga nasashada: kordhinta qaybaha muhiimka ahi waa inaysan ka yaraan 15%;
9. Waxtarka sifeynta: Waxtarka sifeynta ee walxaha aan saliida lahayn ee maaddada iyo kala-goysyada qaybaha muhiimka ah waa inaysan ka yaraan 70%.
10. Hantida Antistatic: kharashka korontada waa inuusan ka badnaan 0.6μC / gabal.
Digniin, Digniin Iyo Deg Deg
6. Wadarta guud ee difaaca waa in la beddelaa maalin kasta; haddii ay jirto qoyaan ama faddarayn, fadlan beddel guud ahaan isla markiiba.
7. Haddii loo baahdo, fadlan samee daaweynta jeermiska ka hor isticmaalka.
Kahortaga:Ka taxaddar inaad isticmaasho haddii aad xasaasiyad ku leedahay sheygan
Taariikhda Soosaarka Iyo Dufcaddii Wax Soosaarka No.:Eeg xirmada
Ururka Diiwaangashan / Soo-saaraha / Ka-dib-iibinta Ururka Adeegga:Hebei SUREZEN Waxyaabaha Difaaca Caafimaadka Co., Ltd.
Goob Waxsoosaar:Bariga tuulada Huangjiazhuang, Magaalada Chang'an, Degmada Gaocheng, Magaalada Shijiazhuang
Xiriir:Tel: 031189690318 Koodhka boostada: 050000
Hore: Guud ahaan Badbaadinta
Xiga: Dharka Maqaatiga ah ee Anti